Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » SKAL Rome waxay leedahay Guddi Fulineed oo cusub
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xubnaha Gudiga SKAL Rome
Skal International waa naadiga dhabta ah ee caalamiga ah ee Xirfadlayaasha Warshadaha Safarka. Skal International waa dhaqdhaqaaq caalami ah oo isku xira dhaqaaqayaasha iyo gariiriyaasha. warshadaha safarka iyo dalxiiska. Naadiga SKAL ee ku yaal magaalada Rome ee dalka Talyaaniga waxay ku dhawaaqeysaa guddi cusub oo fulineed sanadka 2021-2023.
Naadiga Caalamiga ah ee 'Skal International Club of Rome' waxay leedahay Guddi Fulineed oo cusub oo la doortay, muddadii 2021-2023, inta lagu gudajiray shirkii aan caadiga ahayn ee Naadiga oo lagu qabtay Juun 23rd xaruntiisa taariikhiga ah, Hotel Universo ee Rome.
Goluhu wuxuu muujiyey codkiisa isla markaana Gudiga cusub ayaa shaqada lawareegey.
MADAXWEYNIHII HORE, PAOLO BARTOLOZZI, wuxuu khudbadiisa ku sharaxay shaqadii Gudiga Agaasimayaasha ee uu hogaaminayay 16-kii bilood ee la soo dhaafay.
SKAL Rome ee madaxweynihii hore Paolo Bartolozzi wuxuu sharraxay shaqadii Golaha Maamulka ee 16-kii bilood ee la soo dhaafay, isagoo soo bandhigaya caqabadaha haysta COVID-19, iyo isagoo hoosta ka xariiqay geeddi-socodka isbeddelka naadiga iyo ku-xirnaanshiyaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah.
Waxaa loo doortay xilli-xiga ee 2021-2023 waxay ahaayeen Luigi Sciarra oo madaxweyne ah, Vanessa Cerrone, Xoghaye; Paolo Bartolozzi, Khasnaji, Tito Livio Mongelli iyo Fulvio Gianetti, Madaxweyne ku xigeenada. Antonio Borgia iyo Rita Zoppolato ayaa loo doortay hantidhawre.
Nasiib ayaan lahaa, wuxuu sii wadayaa Paolo Bartolozzi inuu awooday inaan isku halleeyo Guddi aan caadi aheyn oo ka shaqeynaya guusha Naadiga, iyadoo aan loo eegin xaaladda deg degga ah ee COVID.
Madaxweynaha cusub Luigi Sciarra wuxuu u mahadceliyey dhammaan Isboortiga ka soo qeybgalay.
Waxay noqon doontaa Madaxtooyo calaamadda sii socoshada iyadoo la tixgelinayo dhammaan dadaallada horay u jiray, ee ka mid noqoshada xubnaha ee waxqabadyada Naadiga iyo horumarinta fursadaha u furan sidoo kale mahadnaqa SKAL Europe.
Intii lagu gudajiray Golaha, xafladdii bixinta GOLAHA SHAQAALAHA EE SHAQAALAHA EE SKAL ITALIA ayaa la qabtay oo uu jimicsi ka sameeyay Antonio Percario si uu u sameeyo Paolo Bartolizzi.
SKAL InternationaWaxaan doortay guddigeeda horaantii bishii Janaayo ee sanadkan.